Red's Rose Dream: ရာဘာဖိနပ်တစ်ရံ
Drop the burden of past.
Posted by Red's Rose Dream at 12:04
ဂျပန်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်တွဲ မှာပါတဲ့ အခန်းလေးတစ်ခန်းပါ ဖိနပ်ချုပ်တဲ့ဆရာက ဖိနပ်ချုပ်တယ်.. ခြေထောက်ကို မြင်ရုံနဲ့ ဖိနပ် နံပါတ်သိတဲ့အထိ သဘာရင့် ဖိနပ်ချုပ်ဆရာကြီးတစ်ယောက်..မင်းသမီးကို ဖိနပ်တစ်ရံ ချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေထောက်စတိုင်းပါတယ် ပြီးတော့ ပုံစံတူယူထားလိုက်တယ်.. နောက် သာရေရှူး ဖိနပ်လေး တစ်ရံလုပ်ပေးလိုက်တယ်...ပြီးတော့ မင်းသမီးကို လက်ဆောင်ပေးပါတယ်..ဖိနပ်ကို စစချင်းစီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရွှတ်လို့ အသံလေးထွက်လာတယ်...
ဖိနပ်ကောင်းတစ်ရံ၊ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံကို စီးမိရင် ဒီလို အသံလေးကြားရမယ်လို့ ဖိနပ်ချူပ်ဆရာကြီးက ရှင်းပြပါတယ်.. ပြီးတော့ ဖိနပ်လေးက တကယ်လည်းစီးလို့ ကောင်းတယ်လို့ မင်းသမီးက ပြန်ပြောပါတယ်... စဉ်းစာစရာတွေအများကြီး ပေးလိုက်တဲ့ အခန်းလေးပါ.. စဉ်းလဲ စဉ်းစားမိပါတယ်.. အဆင်ပြေချင်တဲ့ အရာဆို ဒီလိုလေး အစကတည်းကချောမွေ့နေတက်တယ်လို့....
နောက် Tomato ကိုရီးယားကားထဲမှာလဲ ဖိနပ်အကြောင်းကို သေချာပြောပြ ရှင်းပြဖူးတာ ရှိတယ်...အဲ့ဒီကားကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းကို ဖိနပ်ရွေးရင် ခြေထောက် သက်သာမယ် ဖိနပ်မျိုး ရှာစီးတာများပါတယ်လေ.... တချို့ ဖိနပ်တွေက ဒီဇိုင်းဆန်းမယ်၊ လှမယ်၊ မြင်သူငေးလောက်မယ်၊ အဖိုးအနက်ဂ ထိုက်တန်ချင်တန်နေ ပါမယ်.. ကိုယ်ကလည်း ဖိနပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို တက်နိုင်တယ်... အဆင်လည်းကြိုက်တယ်.. လိုချင်တဲ့အချက်တွေလည်း ပြည့်စုံပါမယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်စီးကြည့် လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ထုတ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းက ကိုယ့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာမရှိခဲ့ရင်... စဉ်းစားမိတယ် လှတာကိုသဘောကျပြီး ခြေထောက်အနာခံပြီး စီးနိုင်လား၊ ဒါမှမဟုတ် တန်ဖိုးအများကြီးပေးပြီး ဘယ်နှခါစီးဖို့စဉ်းစားထားလဲ...ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့ အပေါ်မှာမူတည်ပြီး လူတွေစီးတဲ့ ဖိနပ်တွေ ကွဲလွဲကုန်ကြပါတယ်....ဒါကြောင့်လမ်းမပေါ်မှာ ရောင်စုံဖိနပ်တွေနဲ့ ဒီဇိုင်းတွေ တွေ့နေရတာပေါ့...ဖိနပ်တစ်ရံကိုကြည့်ပြီး အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု့ကို သိနိုင်မယ် ထင်တယ်...
ငယ်တုန်းမို့ လှတဲ့ဖိနပ်တွေသဘောကျ နှစ်ခြိုက်မည့် ပျိုပျိုမေတွေ အများကြီး ခြေထောက်နာမယ်မှန်း သိရက်နဲ့ အနာခံပြီး စိးကြတဲ့လူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်... .အရွယ်ရလာတော့ သက်တောင့် သက်သာရှိမယ့် ဒီဇိုင်းလေးကိုရွေးလာကြတယ် .. ဒီထက်အသက်ပိုကြီးလာတော့ လှတာတွေကို ဂရုမစိုက်နိုင်ကြတော့ဘူး...ဒီလိုနဲ့ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ဈေးကွက်ထဲမှာ၊ တံဆိပ် အမျိုးမျိုး၊ လူတန်းစားအမျိုးမျိုးအတွက် ထုတ်ထားတာ တွေ့လာမယ်.. ရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်ခြေထောက်အတွက်၊ ကိုယ့်လျှောက်တဲ့လမ်းတွေ နေရာတွေနဲ့ သင့်တော်မယ့် ကိုယ့်ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံ၊ တစ်ရံမကဘူး ရှိနိုင်ပါသေးတယ်.လေ .ဒါပေမယ့် အဓိကရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ်စီးလိုက်တိုင်း သက်တောင့်သက်သာ ရှိနေစေမယ့်ဖိနပ်တစ်ရံကိုတော့ဖြင့် ဖိနပ်ဝယ်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်တယ်လို့.. တချို့တွေကတော့လည်း သွားမယ့်နေရာလေးအတွက်ရည်ရွယ်၊ ပေါ်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီး လေးကို ရည်ရွယ်၊ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး ရွေးချယ်ကြတယ်လို့..
အရင် စနေက ဖိနပ်လေးတွေလှ၊ ဈေလည်းသင့်တော်၊ ကိုယ့်မှာလည်း လိုအပ်နေလို့ စီးကြည့်လို့ အဆင်ပြေတာနဲ့ ရွေးပြီး ၀ယ်ခဲ့မိတယ်.. ဘဲလေး နောက်ပိတ်ဖိနပ်လေးတွေပါ...ဒါပေမယ့် တကယ်ကြီး စီးတော့ ၃ ရံဝယ်တာ ၂ ရံက ခြေထောက်နာတယ်... လမ်းလျှောက်လို့ မကောင်းဘူး လျှောက်တိုင်း နာနေတာ ..စဉ်းစားမိတယ်..ငါ့မလဲ သေချာရွေးထားတာတောင် နာတဲ့ဖိနပ်နဲ့တိုး နေတယ်လို့... နောက်ဆုံးတစ်ရံတော့ အခုထိမစီးရသေးလို့ မသိသေးဘူး...တကယ်သာ သုံးရံလုံးစီးလို့ မရရင်တော့ အရင်က စီးနေတဲ့ ရာဘာဖိနပ်က ငါ့အတွက် သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ကောင်းဆုံးပဲလို့. တွေးမိလို့...
တကယ်လည်း သက်တောင့်သက်သာ ကြိုက်လို့ ရာဘာဖိနပ်နဲ့ နေနေတာကြာပြီ.. ပုံဆိုးပန်းဆိုး ရှိနေတာ သိလည်း ကိုယ်သက်သာတာကို သဘောကျလို့ အလှစီးဖို့ တစ်ရံပဲထားပြီး ရာဘာဖိနပ်ကြီးနဲ့နေတာပဲ နှစ်ချီနေပေါ့..တစ်ခါတလေတော့လည်း သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်လို့.. တခြား ဘာမှထူးခြား တဲ့နေရာမျိုး ပွဲလမ်းတွေသာ မဟုတ်ခဲ့ရင် ရာဘာဖိနပ်လေးက ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေဆုံးပဲလို့ စဉ်းစားမိလိုက်လို့